Allgedo.com » 2012 » November
Home » Archive Montly November, 2012
Dilal ka dhacay magaalada Muqdisho iyo Howlgalo balaaran oo soconaya
Wararka laga helayo magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xalay nin ku hubeysan AK-47 uu sedex qof oo rayad ah ku dilay gudaha magaalada Beledweyne. Sida wararku sheegayaan dilka dadkaan Rayadka ah ayaa ka dhacayu bartamaha Magaalada wexeyna kamid ahaayeen dadka deegaanka. Ciidamada Dowladda iyo Kuwa AMISOM ayaa saakay Baaritaan ka bilaabay Xaafadaha Beledweyne Gaar ahaan Xaafadda...
Qarax ka dhacay magaalada Marka iyo Howlgalo soconaya.
Qarax xoogan ayaa maanta magaalada Marka ee gobolka Sh/hoose lagula eegtay ciidamo katirsan dowlada Soomaaliya Rag hubaysan ayaa la sheegay in ay Bambo ku tuureen ciidamada dowlada oo howlgalo ka waday gudaha magaalada sida ay goob joogayaal sheegeen Lama sheegin wax qasaaro ah oo ka dhashay qaraxan lagu weeraray ciidamad dowlada, waxaana qaraxa kadib la maqlayay rasaas ay ridayeen ciidamada dowlada Wararka...
Faah Faahin: Dagaal ka dhacay gobolka Sh/hoose.
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dowlada Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada AMISOM iyo ururka Alshabaab. Dagaalkan si gaar ah uga dhacay degmada Janaale iyo Degmada Qoryooley halkaasi oo la sheegay inay ku sugan yihiin ciidamada Alshabaab,iyadoo ciidamada Alshabaab ay is difaaceen. Wararka ayaa sheegaya Dagaalkaas...
Madaxweyne Xasan Sh oo safaro ku tagaya dalalka Kenya, Jabuuti iyo Itoobiya
Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Saaka u socdaalaya Dalalka Dariska la ah Soomaaliya Sida Dowladaha Jabuuti iyo Itoobiya. Wararkii ugu dambeeyay ee Ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Garoonka Diyaaradaha uu ku sugan madaxweynaha iyo wafdigiisa, isagoo u socdaalayo Dalaka Jabuuti iyo Itoobiya. Madaxweynaha Dalka ayaa casuumad ka helay Madaxweynaha Dalka aan...
Howlgalo balaran oo ka soconaya degmada Hurwaa ee gobolka Banaadir
Howlgalo balaaran ayaa saaka si wada jir ah uga bilowday xaafado ka tirsan Degmooyinka Huriwaa iyo Yaaqshiid, iyadoo ay wadaan ciidamada Nabada Sugida Gobolka Banaadir. Sida ay sheegayaan wararka howlgalada ayay ciidamada saaka salaadii subax kadib ka bilaabeen xaafada Suuqa Xoolaha, iyagoo guri guri u baaraya, waxaana howlgalka ka mid ah Baaritaano ay ciidamada ku galayaan guryo la soo farmuuqay. Holwgalkan...
Gudoomiyihii Suuqa Bakaaraha ee Muqdisho oo goordhow ladilay
Waxaa goor dhow gudaha Suuqa Bakaaraha lagu dilay Gudoomiyaha Ganacsatada Suuqa Bakaaraha Axmed Nuur Awdiini, iyadoo lala dilay mid ka mid ah Ilaaladiisa. Wararka na soo gaaraya ayaa sheegaya in dilka Gudoomiyaha uu ka dhacay afaafka hore ee Xafiiskiisha Shaqada, xili uu saaka gali rabay, waxaana wali soo baxaya warar is khilaafsan. Saacadu marki ay ahayd 7:35 ayaa waxaa is hortaagay Gudoomiyaha Mid...
AFP: 12 ruux oo ku dhimatay dagaalkii ka dhacay magaalada Beled-Xaawo
Xarakada Alshabaab aya dhawaan weerar culus ku soo qaaday magaalada Baled-Xaawo, iyadoo xarakada Magaalada maamuleysay wax ka yar laba saac. Dagaalka wuxuu dhexmaray alshabaab oo weerar ahaa iyo ciidamada Dowlada iyo Ahlu suna oo dhinaca ah. Hadaba dadka ku dhintay ayaa la shaaciyay, waxaana tirada dhimashada la sheegay inay ahayd 12 ruux oo isugu jira kooxohii dagaalamay iyo Dad Shacab ah. “Kooxaha...